Valleys နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/8)
Though it can canabit of work to get to some of the mountainous valleys we will introduce here, it is precisely that extra effort that makes it worth getting there! As beautiful as the valleys are in shades of fresh spring green, the autumn foliage season too has its charms.
မြစ်မှာ ပျော်ပါးဆော့ကစားဖို့ ဆိုရင် ဒီနေရာက အကောင်းဆုံးပါ။ နိရောဒိုဘလူး လို့ချီးမွမ်းခေါ်ဆိုနိင်တဲ့ လှပခန့် ညားတဲ့မြစ်ဖြစ်တယ်။ နွေရာသီရေ...